Wuhan Pixel Box Cinema I-Cinema - Imagazini yoyilo
I-Cinema "I-Pixel" yinto esisiseko yemifanekiso, uyilo luhlola ubudlelwane bokuhamba kunye ne-pixel ukuze lube ngumxholo wolu loyilo. "I-Pixel" isetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo ze-cinema. Ibhokisi yeofisi enkulu yibhokisi yeholo enkulu inemvulophu engqokolayo eyenziwe ngamagqabi angaphezulu kwe-6000 eepaneli zentsimbi. Udonga lomboniso luhonjiswe ngesixa esikhulu semigca esikwere eludongeni lubonisa igama lobuhle bemifanekiso bhanyabhanya. Ngaphakathi kule cinema, wonke umntu angayonwabela imozulu enkulu yehlabathi ledijithali eliveliswa kukudityaniswa kwezinto zonke "zePixel".
Igama leprojekthi : Wuhan Pixel Box Cinema, Igama labayili : One Plus Partnership Limited, Igama lomthengi : Hubei Xiang Sheng & Insun Entertainment Co. Ltd..
I-Cinema One Plus Partnership Limited Wuhan Pixel Box Cinema